Iimfundiso Ezinkulu ZeBhayibhile Ngovelwano
Isikhokelo Senceba eBhayibhileni
Sibizwa ukuba sibe novelwano ekuhambeni kwethu kobuKristu. Nsuku zonke sibona abantu abanesidingo. Siva malunga nabo kwiindaba, ezikolweni zethu, nangaphezulu. Nangona kunjalo kwihlabathi lanamhlanje, kuba lula ukujonga abo banesidingo abangabonakaliyo. Nazi ezinye iivesi zeBhayibhile kwiimfesane ezisikhumbuza ukuba sibe nesihe kwiingcamango nezenzo zethu:
Inceba Yethu Kwabanye
Sibizwa ukuba sibe novelwano kwabanye.
Kukho iindinyana ezininzi zeBhayibhile ezithetha ngenceba ezigqithiseleyo kwaye zifikelela kubantu abasondelene nathi:
Xa uYesu waya emanzini, wabona isihlwele esikhulu, waza waba nesihe kubo, ngokuba babefana nezimvu ezingenamalusi; Kwaye waqala ukufundisa izinto ezininzi. (NASB)
Yiba nomusa nenyameko komnye nomnye, nithethelelane, njengokuba kuKristu uThixo ukuxolela. (NIV)
Kolose 3: 12-13
Ekubeni uThixo ukhethe ukuba ube ngabantu abangcwele abathandayo, kufuneka nigqoke inceba yenceba, ububele, ukuthobeka, ububele kunye nomonde. Nika izibonelelo zomntu omnye, uze uxolele nabani na abakucaphukisayo. Khumbula, iNkosi ikuxolele, ngoko kufuneka uxolele abanye. (NLT)
Galati 6: 2
Yabelana ngemithwalo yomnye, kwaye ngale ndlela uthobela umthetho kaKristu. (NLT)
Mateyu 7: 1-2
Musa ukugweba, okanye nawe uya kugwetywa. Kuba ngendlela efanayo ugweba abanye, uya kugwetywa, kunye nomlinganiselo oyisebenzisayo, uya kulinganiswa kuwe.
Roma 8: 1
Ukuba ungokaKristu Yesu, awuyi kuhlwaywa. (CEV)
IZibhalo zisithi, "Ukuba iintshaba zakho zilambile, zinike into yokutya. Yaye ukuba banxaniwe, banike into yokusela. Oku kuya kufana nokufaka amalahle avuthayo ezintloko zabo. "(CEV)
Noko ke uThixo wayemnene.
Waqhubeka exolela izono zabo kwaye akazange abatshabalalise. Wayedla ngokukrakra, kodwa akazange aphelelwe ngumsindo. (CEV)
IMizekeliso 31: 6-7
Nika isiselo esinxilisayo kuye otshabalalisayo, newayini kuye obomnyuzi bakhe. Makhe asele aze amkhohlwe intlupheko yakhe aze akhumbule ingxaki yakhe. (NASB)
Inceba kaThixo Kuye
Akunjalo nje ukuba sibe novelwano. UThixo ungumzekelo obalaseleyo wenceba nemfesane. Usibonise inceba enkulu kwaye Nguye umzekelo esifanele silandele:
2 Petros 3: 9
INkosi ayithethi ngokuphathelele isithembiso saKhe, njengokuba abanye babalwa ukunyaniseka, kodwa banomonde kuthi, bengathandi ukuba nabani na ababhubha kodwa bonke bafanele baphenduke. (NKJV)
Xa uYesu ephuma emkhombeni, wabona isihlwele esikhulu. Wayevalela kubo waza waphilisa wonke umntu ogulayo. (CEV)
Yeremiya 1: 5
"UYeremiya, ndingumdali wakho, kwaye ngaphambi kokuba uzalwe, ndakunyusela ukuba uthethe kum iintlanga." (CEV)
Ndixelele konke oku ukuze ube noxolo kum. Lapha emhlabeni uya kuba nezilingo ezininzi kunye neentlungu. Kodwa kha thazeka, ngokuba ndinqobile ihlabathi. (NLT)
1 Yohane 1: 9
Ukuba siyavuma izono zethu, uthembekile kwaye ulungile kwaye uya kusithethelela izono zethu aze asihlambulule kuzo zonke ukungalunganga.
Yakobi 2: 5
Yiphulaphule, bazalwana kunye noodadewethu abathandekayo: Ngaba uThixo akayikhethileyo abahlwempuzekileyo kwihlabathi ukuba babe zityebi ngokholo baze bazuze ubukumkani, athembise abo bamthandayo? (NIV)
IsiLilo 3: 22-23
Uthando oluthembekileyo lweNkosi alupheli! Iinceba zakhe azipheli. Ukuthembeka kwakhe kukukhulu; Imfesane yakhe iqala ngokutsha rhoqo ekuseni. (NLT)
UBhatshebha nguKumkanikazi oBaziwayo kaDavide
Isicwangciso soPhulo lweSifundo soBuhlu lukaJames McKeever
Yintoni IBhayibhile Eyithetha Ngomtshato Wesiqabane Nokutshata?
Iimfundiso zeBhayibhile zeNtsana entsha
Ngubani uSimeon (uNiger) eBhayibhileni?
Abaphulaphuli beVangeli likaMarku
Iinyesi zeBhayibhile zenzondo
Ngubani uAkani eBhayibhileni?
Ukufunda Iifama zeeTa
Gxininisa kwiZiQinaniso eziBini
Ziziphi iiVebhu, kwaye Ziyasetyenziswa Njani ngeSpanish?
Inkcazo yokungahloneli uThixo, ukungahloneli uThixo
Ngaba AbaPristi BamaKatolika Batshatileyo?
Iingoma ezifutshane neGrike likaThixo iHayidesi
Indlela Yokukhuphula i-Orange Potassium i-Dichromate Crystals
IsiTshintsho sesithandathu: Umbhalo, iMvelaphi, kunye nentsingiselo
I-Taoist Five Elements
Iimifanekiso eziphambili ze-Punk Rock
Ukuhambisa igama elithi 'El' elithi 'La' kwiiNdawo zamaSpeyinzi
Yintoni Abaviwa Abayayilindela NgomNxibelelwano WeTitshala
Ngubani ocula ingoma yamaKristu "ngonaphakade?"
IJografi yeSouth Africa
Iindlela ezili-6 zokunceda ii-Fireflies
Inkampani kaChristopher Radko
IMfazwe yaseMexico naseMerika: Jikelele uWinfield Scott
Fumana i-Amcestors yakho yeMfazwe yaseMelika yaseMelika
I-Documentos para probar que el matrimonio no es de conveniencia
Ukukhazimulisa uThixo - Ukungabi ngodlova
Ukudibanisa kwe 'Poder'